खाद्य संस्थानले माग्यो ३१ फ्रेस कर्मचारी, एसएलसी उत्तीर्णलाई पनि अवसर Bizshala -
सामसङ कोरियाबाट २६ विज्ञको टोली किन आयो नेपाल ?
महोत्तरीको रामगोपालपुरमा ज्योति बैंकको शाखा
क्रेडिट रेटिङ विजिनेशमा इक्रा नेपालको एकाधिकार अन्त, केयर रेटिङ्स नेपाललाई संचालन अनुमति
खाद्य संस्थानले माग्यो ३१ फ्रेस कर्मचारी, एसएलसी उत्तीर्णलाई पनि अवसर
काठमाण्डौ । नेपाल खाद्य संस्थानले विभिन्न ५ पदका लागि ३१ फ्रेस कर्मचारी मागेको छ ।
सोमबार पदपूर्ति सम्बन्धी सूचना प्रकाशित गर्दै संस्थानले सबै पदमा फ्रेस कर्मचारी मागेको हो ।
सातौ तहको वरिष्ठ अधिकृत(प्रशासन) पदमा खुल्लातर्फ २ र महिलातर्फ १ गरी ३ कर्मचारी मागिएको छ । यो पदमा मान्यताप्राप्त शिक्षण संस्थाबाट स्नातक उत्तीर्णले आवेदन दिनसक्नेछन् ।
यसैगरी, प्रशासन समूहतर्फको छैठौं तहको अधिकृत पदमा दुई खुल्ला, एक महिला र एक आदिवासी जनजाति गरी कुल ४ जना कर्मचारी मागिएको छ । यो पदमा समेत स्नातक उत्तीर्णले नै आवेदन दिनसक्नेछन् ।
यस्तै, पाँचौ तहको वरिष्ठ सहायक(प्रशासन) पदमा खुल्लातर्फ ४, महिलातर्फ १ र आदिवासी जनजातितर्फ १ गरी कुल ६ कर्मचारी मागिएको छ । यो पदमा प्रमाणपत्र तह उत्तीर्णले आवेदन दिनसक्ने बताइएको छ ।
पाँचौ तहको मिल अपरेटर पदमा एकजना मागिएको छ । यो पदमा मेकानिकल इञ्जिनियरिंगमा प्रमाणपत्र तह उत्तीर्णले दरखास्त दिनसक्ने छन् ।
सबैभन्दा बढी चौथो तहको प्रशासन सहायक पदमा जनशक्ति मागिएको छ । यो पदका लागि १७ जना फ्रेस कर्मचारी मागिएको छ । ९ जना खुल्ला, ३ महिला, १ आदिवासी जनजाति, १ मधेशी, १ दलित, १ अपांग र १ पिछडिएको क्षेत्र गरी १७ जना मागिएको हो । एसएलसी उत्तीर्णले यो पदका लागि आवेदन दिनसक्ने बताइएको छ ।
सबै पदको लिखित परीक्षा लोकसेवा आयोगले लिनेछ । खाद्य संस्थानको प्रधान कार्यालय भद्रकाली प्लाजा काठमाण्डौबाट दरखास्त फारम लिन सकिने व्यवस्था मिलाइएको छ । सूचना प्रकाशित भएको ३५ दिनभित्र र दोब्बर दस्तुर तिरेर अर्को ७ दिनभित्रमा आवेदन बुझाइसक्नुपर्नेछ ।
चौथो, पाँचौ र छैठौं पदमा नियुक्त हुनेले कर्णाली अञ्चलका जाजरकोट, बाजुरा र गोरखा लगायतका जिल्लामा काम गर्नुपर्ने शर्त राखिएको छ ।
new job नेपाल खाद्य संस्थान
हिमालयन बैंकको संचालक समितिलाई काम गर्न अदालतको रोक, कारण देखाउ आदेश जारी
राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाले १.५८ अर्ब आइपीओ ल्याउँदै
एभरेष्ट र लक्ष्मी बैंकबीचको मर्जर टरेकै हो ? आफैं पूँजी पुर्याउने एभरेष्टको यस्तो निर्णय
सेयर लगानीकर्ता डूबाउने को–को हुन् ? अनलराज भट्टराईको विश्लेषण
प्रतिसेयरमा ४१ पैसा रिटर्न दिने कम्पनी कुन होला ?
कहालीलाग्दो गरी बिग्रिएको कम्पनीबाट इपीएसमा झुक्याउने खेल
मेगाले माग्यो ११६ कर्मचारी, ट्रेनी असिस्टेन्टमा स्थानीयलाई
काठमाण्डौ । मेगा बैंक लिमीटेडले चारवटा तहका लागि १ सय १६ कर्मचारी...
सिन्धु विकास बैंकले ५६ कर्मचारी माग्यो, प्लस टु उत्तीर्णलाई
काठमाण्डौ । सिन्धुुपाल्चोकमा मुख्य कार्यालय रहेको सिन्धुु विकास...
एनआइसी बैंकले माग्यो दर्जनौ कर्मचारी, जुनियर अफिसर्सदेखि
काठमाण्डौ । देशकै टप वाणिज्य बैंकमध्येको एक एनआइसी एशिया बैंकले...
सिटिजन्स बैंकमा खुल्यो दर्जनौलाई जागिरको अवसर
काठमाण्डौ । सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनलले ५ पदका लागि दर्जनौ कर्मचारी...
बैंकहरुमा जागिरको बग्रेल्ती अवसर !
काठमाण्डौ । विभिन्न बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरुले जागिरको...
राष्ट्रिय बिमा कम्पनीले माग्यो तीनदर्जन कर्मचारी
काठमाण्डौ । राष्ट्रिय बिमा कम्पनी लिमीटेडले ६ पदमा ३६ कर्मचारी...
दुई माइक्रोफाइनान्सले मागे दर्जनौ कर्मचारी
काठमाण्डौ । दुुई लघुवित्त बित्तीय संस्था(माइक्रोफाइनान्स)ले...
व्यवस्थापन पढेकालाई कति धेरै जागिरको अवसर !
काठमाण्डौ । शिखर इन्स्योरेन्स र नेपाल कम्युनिटी डेभलपमेन्ट बैंक...